Ịdọ aka na ntị njem US, mana ọ ka mma na Bahamas
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Bahamas Breaking » Ịdọ aka na ntị njem US, mana ọ ka mma na Bahamas
Akụkọ Bahamas Breaking • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • Ịtụ egwu • Akụkọ Ọchịchị • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche • WTN
Ndepụta mba ndị United States na -agbakwunye na '' njem njem '' ya na -eto. Kemgbe ụnyaahụ ọ gụnyekwara Bahamas.
Ọ ka mma na nchekwa na Bahamas ma e jiri ya tụnyere njem na ọtụtụ steeti US dịka Florida ma ọ bụ Louisiana.
Ebe ọ bụ na ụdị ụlọ a adịghị na ndepụta njem, na ntụnyere ụlọ abụghị akụkụ nke ịdọ aka na ntị njem mba ofesi, usoro ndị America tụpụrụ ebe ndị njem dị ka Bahamas ugbu a.
Centlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa US (CDC) ewepụtala ịdọ aka na ntị maka ọkwa njem 4 maka ndị ezumike America na -eme atụmatụ ịga Bahamas.
Nke a nwere ike imetụta ndị ọbịa Disney Cruise Line ndị na -eme atụmatụ ileta mba agwaetiti ahụ n'ụgbọ mmiri Disney na nso nso a.
Ọ bụ ezie na ọrịa na -efe efe kachasị na United States, ha na -ebelata na Bahamas, na -agbagha ịdọ aka ná ntị nke ọkwa 4 nke US nyere megide Bahamas agbata obi.
CDC taa gbakwunyere mba 6 na listi ịdọ aka na ntị njem nke Ọkwa 4 ya.
Mba isii agbakwunyere na ndepụta Njem Njem US bụ:
Ọ kacha mma ileta Bahamas?
Ọ ka mma na Bahamas. Nke a bụ aha obodo a mara maka ọmarịcha aja aja aja, mmiri na -acha anụnụ anụnụ, na mbara igwe na -acha anụnụ anụnụ. Ndị ọrụ ụgbọ mmiris bụkwa akụkụ dị mkpa nke Pọtụfoliyo njem na mba Caribbean a.
Ọ ka mma n'ezie na Bahamas!
… Kama, Gọọmentị US nyere ịdọ aka na ntị ịgagharị ọkwa 4 megide onye agbata obi ya dị naanị kilomita 100 site n'ụsọ oké osimiri Florida.
Akụ na ụba Bahamas dabere na njem na njem njem. US na -enye Level 4 ịdọ aka na ntị njem bụ nnukwu mmechuihu na ihe iyi egwu nye mba agwaetiti ahụ na ụmụ amaala Bahama 368,000. Ọtụtụ n'ime ha na -arụ ọrụ ma dabere na ọdịmma nke ụlọ ọrụ njem na njem, na ndị America bụ imirikiti ndị ọbịa ha.
Ịdọ aka na ntị njem US megide Bahamas na -agụ, sị:
Agala na Bahamas n'ihi Covid-19. Kpachara anya n'akụkụ ụfọdụ nke Bahamas n'ihi mpụ. Gụọ ndụmọdụ ndụmọdụ njem niile.
Gụọ akwụkwọ nke State COVID-19 peeji nke tupu ime atụmatụ njem mba ofesi ọ bụla.
United States Ụlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC) enyela a Ọkwa 4 ọkwa ahụike njem maka Bahamas n'ihi COVID-19, na-egosi ọkwa dị oke elu nke COVID-19 na mba ahụ. Ihe ize ndụ gị nke ibute COVID-19 yana ibute ọrịa siri ike nwere ike belata ma ọ bụrụ na ị nweta ọgwụ mgbochi FDA kwadoro ọgwụ mgbochi. Tupu ime atụmatụ njem mba ofesi ọ bụla, biko lelee ntuziaka CDC maka ọgwụ ogwu na ejighị ọgwụ mgbochi ọrịa ndị njem. Gaa na ụlọ ọrụ nnọchite anya obodo COVID-19 peeji nke maka ozi ndị ọzọ na COVID-19 na Bahamas.
Akụ na ụba Bahamas dabere na njem, na touri Americasts
Ọ bụ ihe ijuanya na United States na -emebi ọrịa na ọnwụ ọhụrụ, ebe ọnụọgụ Bahamas na -agbada. Ọnụọgụ ọrịa na ọnụ ọgụgụ ọnwụ na Bahamas dị n'okpuru ọnụọgụ na steeti Florida ma ọ bụ Hawaii mgbe a hụrụ ya na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ.
Isi ihe dị iche n'etiti nnukwu USA na obere Bahamas bụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
mgbe 33% nke ndị America na -ekwu na ha agaghị enweta ọgwụ mgbochi, na ọtụtụ n'ime ndị ọzọ ka a na -agba ọgwụ mgbochi, ebe ịgba ọgwụ mgbochi dị ngwa ngwa na US, obere Bahamas enwebeghị ọgwụ mgbochi zuru oke iji nye ya ndị niile bi na ya. Naanị 15.3% nke ndị mmadụ ka a na -agba ọgwụ mgbochi.
Ndị ọbịa nabatara ọgwụ mgbochi ọrịa dị mkpa maka ahụike nke ụlọ ọrụ njem na njem Bahamas
Bahamas kọrọ ọrịa 103 n'ime mmadụ 100,000 n'ime ụbọchị asaa gara aga.
Ọnụ ọgụgụ ndị a na -anọchite anya 37% nke ọnụ ọgụgụ kasị elu, ebe United States na -akọ 59% nke ọrịa kachasị elu.
Ọ bụ ihe kwere nghọta na enyere ndị ọrụ gọọmentị US aka na ntị ka ha dọọ ndị America aka na ntị maka ihe egwu dị na mba ofesi. Agbanyeghị, ọ bụrụ na dabere na ọnụọgụ ọnụnọ na Bahamas maka onye America gbara ọgwụ mgbochi ọrịa doro anya karịa ịnọ n'ụlọ n'ọtụtụ oge, gịnị kpatara na gọọmentị steeti achọghị ịgụnye eziokwu a na ndụmọdụ njem njem mba ofesi?
Lack nke nhazi ụwa na njem
Ọ bụ ihe atụ ọzọ ebe enweghị onye ndu zuru ụwa ọnụ na njem nlegharị anya, ma ọ bụ onye ndu ụwa niile enweghị nnọchite njem.
Juergen Steinmetz, onye isi oche nke Netwọk Njem Nleta Ụwak na -ekwu, "Enweghị nhazi na idu ndú na njem njem na njem njem zuru ụwa ọnụ bụ nnukwu ihe iyi egwu maka akụ na ụba na ahụike."
Bahamas bụ ebe dị nchebe ma dị ọcha ka mmadụ niile nwee obi ụtọ.
Tya Bahamas Tourism Board emelitela ibe ahụike njem ya
Ahụike na ọdịmma nke ndị niile batara ma ọ bụ bi na Bahamas ka bụ ihe kacha mkpa, a na-etinyekwa mbọ siri ike iji belata mgbasa nke COVID-19. Emebela usoro njem na ntinye ndị a iji hụ na Bahamas bụ ebe dị mma ma dịkwa ọcha ka mmadụ niile nwee ọ enjoyụ.